एकैचोटि कति जनासँग बिहे गर्न सकेकी नानी ! « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०७८, बुधबार १८:००
विवाहजस्तो पवित्र नाता सम्बन्धलाई पत्रुहरूले कसरी पैसा कमाउने माध्यम बनाउँछन् ? यस्तै केही पात्रका कारण एकबारको जीवन कष्टकर ढंगले झेलिरहेका रिटायर्ड (०६६ सालमा) उपसचिव हुन् भीमलाल लामिछाने ।
पोखरा मूल घर भएका लामिछाने तीन छोरा र दुई छोरीका पिता, जेठी श्रीमती बाउँठिएर हिँडेपछि एक्लै जीवनको रथ काटिरहेका थिए । ०५० सालमै जेठी श्रीमती अंश लिएर अलग भइन् । १७ वर्षसम्म एक्लै बस्दै आएका उनीहरूको सम्बन्धमा ०६३ साल साउनबाट कानुनी रूपमै पूणर्विराम लाग्यो । छोरा-बुहारी अलग, श्रीमती अलग हुँदा बुढेसकालमा गाह्रो-साह्रो पर्दा, बिरामी हुँदा कोही साथै भइदिए त हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो ।
अलि पैसावाल केटा फेला पारेपछि ऊसँग विवाह गरिहाल्ने । केही महिनापछि विवाह दर्ता गर्ने, अनि विवाह दर्ता गरेको एकाध महिनापछि निहुँ खोजेर सम्बन्धविच्छेद गर्ने र आधा सम्पत्ति माग्ने । यो कुनै कोरा आरोप हैन, तथ्यहरूले यस्तै बोल्छ ।
एउटै महिलाले तीन ठाउँमा विवाह गरेको, विवाह गरेको केही समयपछि नै अदालतमा मुद्दा मामिला गरी अंश माग्ने गरेको प्रमाण पेश गर्दा पनि चेलीका आँशु हेरेर श्रीमान्ले फैसला सुनाए ।
– भीमलालको साथी विनोद पुडासैनी, पोखरा